Sanibar News|Nepal's Best Online Tech ,Deal With Technology , Politics , नेता पौडेल भन्छन्, ‘कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै पथमा सदैव अग्रसर हुनेछु’ – Sanibar News
नेता पौडेल भन्छन्, ‘कृष्ण प्रसाद भट्टराईकै पथमा सदैव अग्रसर हुनेछु’
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको ९६औँ स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर भट्टराईलाई स्मरण गरेको छ।
यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू पनि स्व. भट्टराईले अबलम्बन निष्ठाको बाटोमा इमान्दारिताका साथ अग्रसर हुने बताएका छन्। पौडेल कांग्रेसभित्र निष्ठा र त्यागी नेताका रुपमा परिचित छ।
पार्टीलाई विधिको साशन र देशलाई प्रजातान्त्रिक समतामुलक व्यवस्थाको वैचारिक दृष्टिकोणबाट चलाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। काङ्ग्रेस हाक्न सक्ने, नैतिकवान, ईमानदार, निष्ठावान, स्वच्छ छवी भएको नेताका रुपमा कांग्रेसी कार्यकर्ता चित्रण गर्छन्।
वरिष्ठ नेता पौडेलले आज मंगलबार सामाजिक सञ्जामा लेखेका छन्,‘ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, पूर्व पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री (निष्ठा, ईमान्दारीताका आर्दश पुरूष आदरणीय सन्त नेता किसुनजीको ९६औं जन्मजयन्तीमा उहाँलाई स्मरण गर्दै भट्टराईले देखाएको प्रजातान्त्रिक समतामूलक समाज निर्माण पथमा सदैव अग्रसर रहनेछु। साथै उहाँप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछु।’
को हुन् कृष्ण प्रसाद भटट्राई
स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्म स्व। पिता संकटाप्रसाद र स्व. माता ललितादेवीका कान्छा छोराका रूपमा विसं १९८१ पौषमा भारतको बनारसमा भएको थियो।
राणा प्रधानमन्त्री वीर सम्शेरको वक्रदृष्टिमा परेका विश्वनाथ भट्टराई सपरिवार बनारस निर्वासनमा गएपछि उनी त्यहींबाट बिहारको रामनगर राज्यका राजाका पुरोहित बन्न पुगे। उनका छोरा संकटाप्रसाद पनि तिनै रामनगर रामराजाका पुरोहित थिए। यिनका चारै भाइ छोराहरू भने बनारसमा बसेर अध्ययन गर्दथे। त्यहींबाट यी चारैजना भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। दाइहरूको प्रभावले कान्छा कृष्णप्रसाद राजनीतिमा झन अगुवा हुन पुगे।
गोर्खा दरबारमा पुरोहित यज्ञेश्वर भट्टराईका छोरा पति भट्टराई पृथ्वीनारायण शाहसँग काठमाडौं आएर दरबारमा नै पुरोहित भई बसे। यिनको सन्तति परम्परामा क्रमशः विष्णुहरि, कृष्णलाल, मेदिनीधर, कमलकान्त, विश्वनाथ हुँदै पछिल्लो पुस्तामा संकटाप्रसाद भए। संकटाप्रसादका चार भाइ छोरा-बटुकप्रसाद, नारायणप्रसाद, गोपालप्रसाद र कृष्णप्रसाद थिए। यी चार मध्येका कान्छा छोरा कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्।
नेपालको पहिलो संसदका पहिलो सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:र्स्थापना पश्चातका पहिला प्रधानमन्त्री थिए। २००३ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस गठन गर्दा देखि नै नेपालको राजनीतिमा संलग्न थिए। यिनले २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा जनकपुर-उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाको कमाण्डरका रूपमा काम गरेका थिए। भट्टराई २०१५ सालमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका सभामुख भएका थिए।
भट्टराई २०४६ को जनआन्दोलन पछि गठित अन्तरिम मन्त्रीपरिषदमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ (१९२४-२०११) निर्माण गरी लागू गराउने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा संसदीय निर्वाचन गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्त्व भट्टराईले सफलता पूर्वक बहन गरेका थिए। तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँदै गराएको २०४८ को आम निर्वाचनमा यिनी आफू भनें काठमाडौंबाट पराजित भएका थिए। पछि २०५६ को आम निर्वाचनमा विजयी भएपछि पुन:एकपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
एकजना बामपन्थि राजनीतिक नेता एवं लेखकले बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘नेपाली इतिहासले हेला गरेको एउटा व्यक्ति थिए कृष्णप्रसाल भट्टराई।’ उनको भनाइसँगै भट्टराईलाई नेपालीले बुझ्न र पढ्न सकेनन् भन्ने प्रष्टयुक्ति देखिन्छ। ति कम्युनिष्ट विचार धारामा व्यक्तिले स्व.मदन भण्डारीलाई भन्दा बढी भट्टराईलाई स्थान दिनुपर्नेमा हेला गरिएको तर्क गर्ने गर्छन्। स्व. भट्टराईको राजनीतिप्रतिको इमान्दारिता, लगनशिलता, धैर्यता, त्याग, बलिदानलाई हेर्न हो भने उनी अब्बल राजनीतिक योद्धा थिए।
नेकपाको चियापान कार्यक्रम सम्पन्न
संखुवासभाको खादबारी नगरपालिका– १० घर भएका जीवनको दैनिकी जसोतसो चलेकै थियो । बुबा गाउँमा सानो तिनो काम गर्थे । उनी पनि मजदुरी गर्थे । जीवन गत असार ५ गते भोजपुर षडानन्द गाउँपालिकाको मझुवाबेसीमा इखुवा खोला जललविद्युत आयोजनामा काम गर्न पुगे । त्यसै क्रममा साथीहरुबीच भएको झगडा छुट्याउन गएका उनलाई पछाडिबाट कसैले टाउकोमा रडले हान्यो । फर्केर हेर्दा फेरि रडले घाटीमा...
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश